Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Daandii Xayyaara Aafrikaa 2014 ta'uun muudame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Daandii Xayyaara Aafrikaa 2014 ta’uun muudame
Daandiin Xayyaara Itoophiyaa (Ethiopian Airlines) wolitti aansee yeroo sadaffaatiif Daandii Xayyaara Aafrikaa ta’ee Gurmuu Daandii Xayyaara Aafrikaatiin filatame. Kuni kan ta’e wolgahii woggatti altokko ta’u isa bara kana yeroo 46ffaaf baatii Sadaasaa keessaa magaalaa Aljeersitti ta’e irrattiidha. Daandiin Xayyaara Itoophiyaa muudama kana kan argateef wolitti aansee faaydaa diinagdee argamsiiseefi tarsiimoo cimaa daandii xayyaarichaa kuni baafatee socho’aaruuf, akka ibsa Dandilee xayyaara Aafrikaatti.
Sagantaa baadhaasaa irratti, ‘Dhaabbillee Xayyaara Aafrikaa birootiin tokkoffaa jedhamnee muudamuun keenya akkaan nugammachiise,’ jedhan hojiraawwaachiisaan Daandii Xayyaara Itoophiyaa ob.Tawoldee Gabramaariyaam. Kan injifanno argame kanaaf shoora guddaa taphatan, hojjattoota 8000 Daandilee Xayyaara Itoophiyaa ob.Tawoldeen galatoomfataniiru. Badhaasni kunis kan isaaniiti jedhu.
Osoma dhachiin Aafrikaa guddina diinagdee fi geejjibaa guddaa galmeessisaa jirtuu, guddinni kuni irra jiressatti daandilee xayyaara Aafrikaa hintaane kan badhaasaa jiru. Isaani kan fayyadamtoota guddina kanaa kan ta’aa jiran. Yeroon kuni, faallaa guddina dachiin Aafrikaa galmeessisaa jirtuun, baay’ee ulfaataadha dhaabbilee xayyaara Aafrikaatiif. Hedduun isaanii lubbuu isaaniitiif tattaafataa; du’aafi jiruu jidduu jiru. Kufaatii daandii xayyaara biyyoota Aafrikaa baraaruuf wontoonni lama hatattamatti guutamuu qaban.
Inni jalqabaa, daandileen xayyaara Aafrikaa gara alaatti koola isaanii babal’isuu dhiisanii tarsiimoo balali’iinsa isanii kan biyyoota Aafrikaa jiddutti godhuu irratti xiyyeefachuu qaban. Qabeenyyaa dachii Aafrikaa keessa jiru sochoosuufi dhimma itti bayuu danda’utu isaan irraa eegama. Woliin hojjachuufi gamtaa uumachuun hunda dura dhimma xiyyeeffannaa gahaa argachuu qabuudha.
Lammaffaa, Aafrikaan daandilee xayyaara Aafrikaa hundaaf gabaa banaa taate kan daandileen xayyaara hunduu daangaa malee keessatti socho’an uumuu qabdi. Faffaca’iinsi amma jiru bifa kanaan itti fufe taanaan, kan fayyadamu irra jireessatti daandilee xayyaara miti-Aafrikaa qofa akka ta’e ifa. Gamtaa fi wolhubannoo cimaa daandilee xayyaaraa jiddutti uumuuf mootummaaleen Aafrikaa shoora guddaa taphachutu isaan irraa eegama.
African airlines association awards
badhaasa daandii xayyaara itoophiyaa
Previous articleLaakkofsi baqattoota Eertiraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii hedduu dabale
Next articleBurkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte